Yesnyaahụ Gowalla mara ọkwa a mmekorita ya na otu nke nnukwu ụdị na mbara ala - Walt Disney, Inc .. E nwere ọtụtụ ndị na-arụ ụka na-ekweghị na mmadụ mgbasa ozi - ka ya na geo-elekọta mmadụ ngwa ọdịnala dị ka Gowalla, (Foursquare na Facebook Ebe.) Ya mere, gịnị kpatara mmekọrịta a ji nwee ezi uche?
Nke mbu, o bu ihe ezi uche di na ya, n'ihi na Gowalla bu ihe gbasara onye oru! Ọrụ a, nke etinyere ngwa ya na iPhone m, na-eme ka ọ dị mfe ịlele na ọnọdụ niile n'obodo gị na ụwa. Na ntughari nke ikerita ebe ndi ha masiri gi, atumatu ya na foto gi, a ghaziri gi ugwo na stampụ na paspọtụ gị na ihe mebere ebe ị hapụrụ. Ọ bụ nnukwu ngwugwu nke geo-caching, ndị na-achụ nta ego, na maapụ ndị njem - jikọtara n'otu ngwugwu mara mma nke ọma.
Maka Disney Parks, ọrụ onye ọrụ a sụgharịrị gaa na usoro ọzọ iji gbasaa njikọ aka n'oge njem ahụ, na-anabata ndị ọbịa ma gbaa ha ume inyocha. Na njem mbụ m na Walt Disney World, azụrụ m paspọtụ EPCOT, nke dugara m n'ụlọ ahịa ihe ncheta nke mba 9 niile na World Showcase, ebe m nwere ike ịnweta stampụ na autograph site n'aka onye otu nkedo. [Gụghachi ahịrịokwu ikpeazụ ahụ ọzọ, ndị na-ere ahịa.] Akpọrọ m ndị mụrụ m gaa ụlọ ahịa 9 dị iche iche, iji gbanwere stampụ! Ọ bụ ihe ochie odide nke Disney Njirimara - “niile agafe na-ejedebe na a onyinye ụlọ ahịa.”
Doug m na-agba ndị ahịa anyị ume ka ha jiri ụzọ kachasị dị irè iji tinye ndị ọrụ aka ma tụọ mgbanwe. Na ụwa na-arịwanye elu na ụwa dijitalụ, gịnị ma ị jiri ngwá ọrụ dịka Gowalla? Dịka akụkụ nke mmalite ahụ, Disney enyela ndị ọbịa njem njem Gowalla nke na-eduga ndị ọbịa na njem ndị dị mkpa (na ụlọ ahịa) na ogige ntụrụndụ niile. Na mgbanwe, Disney na-enweta ọnụọgụ bara uru na ọnụọgụ nke ebe ndị ọbịa na-eleta, nke ndị na-agba ịnyịnya bụ ndị kachasị ewu ewu, nke ogige ntụrụndụ na-enweta ọtụtụ okporo ụzọ, wdg. Ozugbo e jikọtara ya na data omume igwe mmadụ nke Disney na-anakọta na ndị ọbịa, ha nwere oke uru akụnụba nke ozi, nke enwere ike iji mee ka ndị ahịa tinyeghachi na ịmepụta mgbanwe dị mma karị.
Media nke ahịa na-agbanwe mgbe niile, mana itinye aka na ndị ọrụ kwesịrị ịdịgide. Kedu ngwaọrụ ndị ụlọ ọrụ gị nwere ike ịmalite nyocha iji melite njikọ aka na mgbanwe?